Kedu ụdị cyclon, ụdị na njirimara nke ajọ ifufe na ajọ ifufe | Netwọk Mgbasa Ozi
N'ime ihe niile gbasara ihu igwe nke na-eme na ụwa anyị, e nwere ụfọdụ ndị na-adọta uche pụrụ iche: okuku. E nwere ọtụtụ ụdị, nke ọ bụla nwere njirimara nke ya nke na-eme ka ọ bụrụ ihe ịtụnanya.
Ma olee otú e si hazie ha? Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma ihe niile gbasara ha, echefula ihe a puru iche.
1 Gịnị bụ ajọ mmiri ozuzo a?
2 Nsogbu Tropical
2.1 Abamuru nke ajọ ifufe nke ebe okpomọkụ
3 Ekuku okuku
4 Oke mmiri ozuzo subtropical
5 Polar cyclone
Gịnị bụ ajọ mmiri ozuzo a?
Na meteorology, cyclone nwere ike ịpụta ihe abụọ:
Ifufe siri ike nke na-eme na ebe ikuku ikuku dị ala. Ha na-aga n’ihu n’ime okirikiri nke na-agagharị onwe ha, ma sitere n’osimiri, n’ozuzu ebe okpomọkụ.
Obere ikuku gburugburu ebe oke mmiri ozuzo na oke ikuku di. A makwaara ya dị ka oke ifufe, na maapụ ihu igwe ị ga-ahụ ya ka ọ nọchitere anya ya na "B".
Antyclone bu ihe ozo, ya bu, mpaghara nsogbu di elu nke na ewetara anyi ihu igwe di nma.
Kedu ụdị ndị enwere?
Enwere ụdị cyclones ise, nke bụ:
Ọ bụ ngwa ngwa na-agbanwe agbanwe nke na-enwe ebe nrụgide dị ala (ma ọ bụ anya). Ọ na-eme ike ifufe na oke mmiri ozuzo, na-adọta ike ya site na ikuku nke ikuku mmiri.
Ọ na-amalite, ọtụtụ oge, na mpaghara mpaghara mbara ala, n'elu mmiri ọkụ nke na-edeba okpomoku banyere 22ºC, na mgbe ikuku dị jụụ, na-ebute usoro nrụgide dị ala.
N'ebe ugwu ụwa ọ na-agbanwegharị na-agagharị; N'aka nke ọzọ, n'akụkụ ndịda ọ na-atụgharị azụ. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ na-arụpụta mbibi dị ukwuu na mpaghara ndị dị n'ụsọ oké osimiri n'ihi oke mmiri ozuzo nke na - ebute oke oke mmiri na mbuze.
Dabere na ike ya, a na-akpọ ya ịda mbà nke ebe okpomọkụ, oké ifufe, ma ọ bụ ajọ ifufe (ma ọ bụ ajọ ifufe na Eshia). Ka anyị hụ ya isi atụmatụ:
Nsogbu Tropical: oke ikuku bu ihe kachasị 62km / h, ma nwee ike ibute oke mbibi na ide mmiri.
Oké ifufe: oke ikuku nke di n’agbata 63 na 117km / h, na oke mmiri ozuzo ya nwere ike ibute oke ide mmiri. Oké ifufe nwere ike ịmepụta oke ikuku.
Ajọ Ifufe: A na-akpọ ya ajọ ifufe mgbe oke ike karịrị nkewa oke ikuku mmiri. Ifufe ikuku bụ opekempe nke 119km / h, ọ nwere ike ibute oke mbibi na ụsọ mmiri.
Ajọ ifufe bụ oke ikuku nke nwere ike ibute oke nsogbu, ya mere ọ dị mkpa ịmara ha iji mee ihe ndị dị mkpa ma si otú a zere ọnwụ nke ndụ mmadụ.
Saffir-Simpson Ajọ Ifufe na-egosipụta ọdịiche ise nke ajọ ifufe:
Abamuru nke ajọ ifufe nke ebe okpomọkụ
N’agbanyeghi na ha nwere ike imebi ezigbo ihe, nke bu eziokwu bu na ha dikwa dị ezigbo mma maka usoro okike, dika ihe ndia:
Ha nwere ike ịkwụsị oge ụkọ mmiri ozuzo.
Ifufe nke ifufe na-ebute nwere ike iweghachi ihe mkpuchi ahịhịa, na-ewepụ osisi ochie, na-arịa ọrịa ma ọ bụ na-adịghị ike.
O nwere ike iweta ezigbo mmiri n’etiti mmiri.
Stlonropical cyclones, nke a makwaara dị ka etiti ikuku, dị na etiti etiti ụwa, site na 30º na 60º site na ikuku akara. Ha bụ ihe ndị a na-ahụkarị, nke ya na anticyclones na-agafe oge na mbara ala, na -emepụta opekata mpe ntakịrị.
Ejikọtara ha na a sistemụ nrụgide dị ala nke na-eme n'etiti ebe okpomọkụ na okporo osisi, ma dabere na ọnọdụ okpomọkụ dị n'etiti igwe ikuku na-ekpo ọkụ na oyi. Ekwesiri ighota na oburu na enwere onu ogugu na ngwa ngwa na nsogbu nke ikuku, ana akpo ha ihe mgbawa cyclogenesis.
Ha nwere ike ibilite mgbe eburu mmiri na-ekpo ọkụ na-abanye na mmiri oyi, nke nwere ike ibute oke mbibi, dị ka idei mmiri o mbuze.
Oke mmiri ozuzo subtropical
Ọ bụ ajọ ifufe nwere njirimara nke ogbe na Mgbatị. Dịka ọmụmaatụ, Arani subtropical cyclone, nke e guzobere na March 14, 2011 na Brazil nke were ụbọchị anọ, nwere oke ikuku nke 110km / h, nke mere eji ewere ya dị ka oke mmiri ozuzo, mana guzobere na mpaghara nke Atlantic Ocean ebe oke ikuku ndi ozo adighi adighi adi.
A makwaara dị ka Arctic cyclone, ọ bụ usoro nrụgide dị ala na dayameta n'etiti 1000 na 2000 km. O nwere ndụ dị mkpụmkpụ karịa nke ajọ ifufe nke ebe okpomọkụ, ebe ọ na-ewe naanị awa 24 iji nweta oke ya.
Genera ifufe siri ike, ma ọ naghị ebibi ihe ebe ọ bụ na e guzobere ha na mpaghara ndị mmadụ na-adịchaghịkeke.
Ọ bụ ikuku ikuku, n'etiti 2 na 10 kilomita na dayameta, nke a na-etolite n'ime oke ikuku mmiri, ya bụ, ikuku na-ebili ma na-agbagharị na axis kwụ ọtọ. A na-ejikọkarị ya na mpaghara mpaghara nke obere nrụgide n'ime egbe mmiri ozuzo, nke nwere ike iwepụta oke ikuku na akụ mmiri igwe.
Ọ bụrụ na ọnọdụ ziri ezi dị na-eme yana nkwalite na nnukwu ụlọ ahịa, nke bụ ihe ọ bụla karịa oké ifufe na-atụgharị atụgharị, site na nke a tonado nwere ike. A na-etolite ihe ịtụnanya a na ọnọdụ nke enweghị nkwalite dị elu, yana mgbe oke ikuku dị elu. Iji hụ ha, ọ ga-adị mma ka ị gaa Great Plains nke United States na Pampean Plains nke Argentina.
Anyị ga-ejedebe ihe ndị a. Kedu ihe ị chere maka ọpụrụiche a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ihe ikuku » Kedu ihe bụ cyclones